राजीनामाको मसी नसुक्दै मीठो स्वाद ! – Lekbesi Khabar
२०७८ साउन १४, बिहिबार
राजीनामाको मसी नसुक्दै मीठो स्वाद !
काठमाडाैँ: एकैदिन, त्यसमा पनि एकै छिनअघि मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिने व्यक्ति राजीनामा स्वीकृतिको खबर नआउँदै बेलायतको लागि राजदूत नियुक्त भएका छन् । एक छिनअघि राजीनामा दिएर खाली भएको मुख्यसचिवमा त्यहि क्याबिनेटले परराष्ट्र सचिवलाई बढुवा गरिदिएको छ ।
त्यहि मेसोमा अढाई वर्षदेखि एकछिन पनि खाली नबसी मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका व्यक्तिलाई पनि अमेरिकाको लागि राजदूतमा नियुक्त गरिएको छ । हिजो बिहान बसेको क्याबिनेटको सबैभन्दा रोचक र महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा निर्णय यिनै हुन् ।
नियुक्तिको चर्चामा चुलिएकै बखत मुख्यसचिव र राजदूत नियुक्तिको एकमुष्ट सूची तयार हुँदै थियो । तर,हुलुमुलमा नियुक्त गर्दा लोकदर्शन रेग्मी,शंकरदास बैरागी र युवराज खतिवडा उछिट्टिने सम्भावना देखेपछि प्रधानमन्त्रीले साइत कुरेर बोलाउनु भएको हिजो बिहानको क्याबिनेट बैठकले तीनैजनालाई रोजेको पदमा पुर्याइदिएको छ ।
आफू बिरोधीले चलखेल गर्ने डरमा गरिएको यस्ता काइते प्रक्रिया र निर्णयले प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिको सर्वमान्य पद्धतिलाई नै चौपट बनाइदिएको जानकारहरु बताउँछन् । यसअघिका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले एशियाली विकास बैंकमा जान म्याद छँदै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका कारण रेग्मीको पालो आएको थियो । नत्र सिष्टमबाट रेग्मी कहिल्यै मुख्यसचिव बन्दैनथे । उता, सोमलाललाई पनि यहि सरकारले फिर्ता बोलाएर जोकर फाल्टु बनाइदियो ।
अहिले पनि सिष्टमबाट रेग्मीले कात्तिकमा अवकाश लिएको भए सचिव चन्द्र घिमिरे मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना अधिक थियो भनिन्छ । तर, रेग्मीलाई अवकाश दिन लगाउँदै बेलायतको निम्ति राजदूत र वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाएर घिमिरेलाई पनि प्रशासनिक भाषामा मरणासन्न तुल्ल्याइयो । सरकारले गरेका एकपछि अर्को यस्ता निर्णयले अब पद्धतिलाई समातेर कुनैपनि कर्मचारी निजामतीको उपल्लो दर्जा र गतिलो देशमा राजदूत बन्न नपाउने निश्चित बनेको छ ।
एकपछि अर्को यस्ता निर्णयले अब पद्धतिलाई समातेर कुनैपनि कर्मचारी निजामतीको उपल्लो दर्जा र गतिलो देशमा राजदूत बन्न नपाउने निश्चित बनेको छ ।
यसअघिको सरकारले मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलाई पनि म्याद छँदै राजीनामा दिन लगाएर क्यानाडाको राजदूत बनाएको थियो । परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराईले समेत राजीनामा दिएर राष्ट्र संघको लागि स्थायी प्रतिनिधि बनेको कारण यता वैरागीले जेनेभाबाट फर्की कामु परराष्ट्र सचिव पाएका हुन् ।
सामान्यतयाः परराष्ट्र सचिव अवकाशपश्चात् राष्ट्रसंघको लागि स्थायी प्रतिनिधिमा जाने गरेको देखिन्छ । तर,बैरागीले ‘बा’ को पहिलेदेखि मुख्यसचिव बन्ने बिश्वास जितेपछि दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत रहेका अमृत राईलाई त्यतैबाट सात समुद्रपारी न्यूयोर्क पुर्याइएको परराष्ट्रका कर्मचारी हाकाहाकी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार परराष्ट्रका कर्मचारी प्रायः राजनीतिक खिचातानीमा पर्ने गरेका छन् ।
अलि अगाडि परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिव भरत पौडेललाई न्यूयोर्क पठाउनुपर्नेमा नपठाई रोकेर राखिएको थियो । तर, दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत रहेका अमृत राईलाई छापामार शैलीमा तानेर त्यता पठाइयो । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गुरिल्ला शैलीमा गरेको नियुक्ति,सरुवा र बढुवाले निजामतीको पद्धतिमा नै प्रहार भएको परराष्ट्रका कर्मचारीले गाईंगुईंमा व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।
यो समाचार आजको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:१६ October 3, 2020
परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई कोरोना संक्रमण: त्रिवि परीक्षा कार्यालय सिल
गान्धी जयन्ती: भारतले नेपाललाई दियो ४१ एम्बुलेन्स र ६ बस
ईन्द्रेणीका कृष्ण कंडेलकी छोरी नविनाको तिज गितले सबैलाई नचायो (भिडियाे सहित)
ओली समूहका चार सांसदले दिए देउवालाई विश्वासको मत
तरुण दल धादिङका नेता सुजन घिमिरे नेपाली कांग्रेस तरूण विभागमा मनोनित
काजल र सितारामको गुरु बिरक्तिएर धादिङमा हलो जोत्दै
अन्तराष्ट्रिय धादिङ समाजको संयोजनमा स्थानिय तहलाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्त्ररण
शिक्षकमाथि राष्ट्रको चरम भेदभाव र शिक्षाप्रति उपेक्षा